Plasma Virus Cleaner for Hotel Environment – UniqueHMS
Plasma Virus Cleaner for Hotel Environment
We are the sole distributor of EasyFo Software,aHotel Management System Software developed in Thailand. In addition, South Korea; Researched and developed by Plabank Co., Ltd. at the Bioplasma Laboratory of Gwang Un University, Seoul. The good news is that JPKim Corporation is now distributing the best Plasma Virus Cleaner using Plasma technology, which is distributed worldwide.
ဗိုင်းရပ်စ်သန့်စင်စက် (Wall Mounted) အမျိုးအစား အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်
ဤ ထုတ်ကုန် ပလာစမာ ဗိုင်းရပ်စ်သန့်စင်စက် (Wall Mounted) အမျိုးအစားသည် အိမ်အတွင်း၊ အိမ်အပြင်၊ ရုံးခန်း၊ ခန်းမ၊ ခန်းမ၊ ဟိုတယ်၊ အစည်းအဝေးခန်း၊ ဟောပြောပွဲခန်း၊ ဖျော်ဖြေရေးခန်းမ၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ ဘာသာရေး အဆောက်အအုံ၊ မြေအောက်ရထား၊ ရထား၊ ဘတ်စ်ကား၊ ရေယာဉ်သင်္ဘော၊ ဓာတ်လှေကား၊ မီးဖိုချောင်၊ ရေချိုးခန်း၊ ဓာတ်ခွဲခန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဥယျာဉ်ခြံဝင်းများ၊ ပြင်ပဟောပြောပွဲခန်း၊ မွေးမြူရေး၊ မွေးမြူရေးခြံများနှင့် လူနေထူထပ်သော ဧရိယာများ စသည့်နေရာများတွင် တပ်ဆင်ပြီး အသုံးပြုနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ဗိုင်းရပ်စ်သန့်စင်စက် (USB) အမျိုးအစား အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်
ဗိုင်းရပ်စ်သန့်စင်စက် (Necklace Type) အမျိုးအစား အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်ချက်
PrevPreviousEASYFO Retraining Q & A
NextPlasma Virus Cleaner (Necklace Type) – 2022 New Year ProductNext